Ihostela limonite icebo lokuqala ibhizinisi lezinhloko - Ilanga News
Home Izindaba Ihostela limonite icebo lokuqala ibhizinisi lezinhloko
Ihostela limonite icebo lokuqala ibhizinisi lezinhloko
UMnu Philanathi Dubazane uthi ngosuku ufaka i-oda lezinhloko eziwu-3000
UMNU Philanathi Dubazane ungumnikazi webhizinisi elidayisa izinhloko, eselimenze washiye umsebebenzi wobunjiniyela kwa-Transnet walenza ngokugcwele.
AKAZISOLI ngokushiya umsebenzi awufundele wayosungula ibhizinisi lokudayisa izinhloko zezinkomo emahostela usomabhizinisi waKwaYanguye, eMelmoth, ongumnikazi weKhendevu Holdings ayisingule eminyakeni emibili edlule.
UMnu Philanathi Dubazane (33) oneziqu zeCivil Engineering azenza eMangosuthu University of Technology (MUT), wenza ezeB. Tech in Civil Engineering eTswane University of Technology, washiya ngo-2019 lapho ayesebenza khona, kwaTransnet, eMalahleni, eMpumalanga emuva kokusungula leli bhizinisi.
“Ngiyinsizwa yasemakhaya, abantu abaningi basemakhaya abanye abangakwazanga ukuqeda isikole, bajwayele ukuqala uhlobo lwebhizinisi lokudayisa izinhloko noma inyama yenhloko. Ngangithi uma ngibuyile emsebenzini ngivakashele izinsizwa ehostela. Ngangifike ngibone ukuthi amathuba akhona ebhizinisini lokudayiswa kwenhloko ngenxa yendlela eyayithengwa ngayo,” kusho yena.
Uthi wabuyela eMalahleni wenza ucwaningo ngezinhloko ukuthi angazithola kanjani nokuthi angenza kanjani ukuthi ayodayisa emahostela aseThekwini namaphethelo lapho ithengwa kakhulu khona inhloko. Uveza ukuthi wahamba waze wayobuya nakwamanye amazwe efuna amadele, okwathi uma ewathola anohlobo lwezinhloko ayezidinga, waqala leli bhizinisi.
“Engasengikutholile wukuthi kunabantu abanamabhizinisi adayisa inhloko eThekwini ababevula izinsuku ezintathu kuphela ngenxa yokuphelelwa yisitokwe, ingekho indawo abangasithola kuyona. La mabhizinisi abesaziwa nje ukuthi ngezimpelasonto kawasebenzi ngoba ingekho inhloko noma izindawo abangathenga kuzona.
“Ngaqala ngahlanganisa amakhasimende, okwakuthi uma ngifikile nezinhloko, ziphele ngaleso sikhathi,” kusho uMnu Dubazana. Uthi kwakuthi uma esephuma emsebenzini ngoLwesihlanu, alayishe izinhloko ezilinganiselwa ku-100 ayozidayisa, okwakuthatha amahora ambalwa ukuba ziphele. Leli bhizinisi uthi waliqala ngo-R45 000 ayevele ewugcinile, okwathi ngokuhamba kwesikhathi waqasha umuntu owayemdayisela.
“Kunzima-ke ukuqasha umuntu uthi makaphathe imali ngoba uyayidla. Ngabona ukuthi uma ngifuna leli bhizinisi likhule, kumele ngizibambele mathupha. Ngaqala ukudayisa izinhloko ngisasebenza ngoMbasa (April) 2019, kwathi ngoNhlangulana (June), ngafaka incwadi yokusula emsebenzini ngoba kuwona bengenza u-R620 000 ngonyaka kodwa kuleli bhizinisi ngiyenza imali engango-R300 000 ngenyanga,” kusho yena.
Uthi washiya umsebenzi wayohlala ehostela laseJacobs, eThekwini, okuyilapho edayisela khona. Indawo yakhe yokugcina isitokwe isehostela lodumo i-17, eMlazi.
“Nginezizathu eziningi ukuthi kungani ibhizinisi lami ligcile ehostela. Esikhulu nje wukuthi ibhizinisi lami linamakhasimende amaningi khona. Ngakha ubudlelwano nomama abapheka izinhloko bazidayise ezindaweni ezahlukene, amakhishi ahlukene nabayithenga kimina baphinde bazidayisele bona. Njengamanje ngesonto ngifaka i-oda lezinhloko ezingaphezulu kuka-3 000 ezindaweni ezahlukene.
“Ezinye ngizithenga eBotswana ezinye ngizithenge eNamibia nasezindaweni ezahlukene eNingizimu Afrika,” kusho uMnu Dubazane othi leli bhizinisi ulifunde ngendlela.
Uthi abalimi abafuyi bezinkomo zenyama) – uma bebulala izinkomo basuke befuna ukudayisa inyama hhayi inhloko, okwenza kubenzima ukuthola izinhloko eziningi endaweni eyodwa. Uveze ukuthi yikho lokhu okudala isidingo sokuthi abenobudlelwano namadele amaningi.
“KwaZulu-Natal kunezinkomo eziningi zobisi, zincane ezinezinkomo zenyama, lokho kwenza kubenzima ukuthola izinhloko eziningi. Ngisho nginaso isifiso sokukhulisa ibhizinisi lami ngilisabalalise nakwezinye izindawo, inkinga wukuthi izinhloko engizitholayo kazaneli eThekwini, yingakho ngingakwenqeni ukudayisela labo ababuye nabo bayodayisa ngoba lokho kakulibulali elami ibhizinisi.”
Uthi usebenza ngabantu abafaka ama-oda amaningi okuthi uma bewafakile abahambisele.
“Ikhasimende liyasho ukuthi lidinga izinhloko ezingaki besengithumela abashayeli balidilivele lapho likhona. Kubakhona labo abathenga eyodwa noma ezimbili, abadlula lapho ngisebenzela khona. Laba-ke bayahlahlelelwa izinhloko zabo. Abantu abahlahlelayo bakhokhelwa u-R30 ngenhloko, leyo mali ikhokhwa kimi ngumnikazi wenhloko besengiyidlulisela kubona ngoba kangifuni amakhasimende ami abuye akhale ngokungaphatheki kahle. Bakhona-ke abantu abawu-6 engibaqashe ngokugcwele,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi esaqala ukudayisa inhloko, wayeyibiza u-R120 manje uma ziyinala useyidayisa kusukela ku-R180 kanti uma zigqoza njengasebusikam zibiza zize zifike ku-350. Ebusika kuba nzinyana ukuthola isitokwe ngoba amadele amaningi kawazibulali izinkomo kwazise zisuke zondile, ngokusho kukaMnu Dubazane.
“Yingakho nekhilo lenyama ebomvu likhuphuka ngalesi sikhathi sonyaka,” kusho yena. Ubonga ukwesekwa yinkosikazi yakhe nomndeni wakhe, okwathi uma ethi ushiyile emsebenzini, bamethemba ukuthi uzokwenzeka le nto afuna ukuyenza.
“kubalulekile ukuthi noma yikuphi lapho sihamba khona sihlale sibheka amathuba. Qala lokho ofisa ukukuqala, kawazi ukuthi kuzokufikisaphi. Ngiqala leli bhizinisi nje, ngangazi ukuthi lizokhula, kodwa ngangingalindele ukuthi kuyoba yile ndlela eselikhule ngayo. Nakho-ke, ukwazisa amakhasimende akho kuyalichumisa ibhizinisi lakho,” esho.
Previous articleLiyaqotha izembe emakhehleni eDowns
Next articleKusolwa lumbago wezidakamizwa kubulawa izithandani nomakhelwane